Wednesday, 22nd May 2013 8:27pm.
Categorized by Keyword View All Dhamma Notes View by Author Meditation Tipitka Dhamma Audio Dhamma Video Dhamma Books Sayadaw Photo Dhamma Notes ထာဝရ ကုသိုလ်တိုးပွားစေတဲ့ ထာဝရဒါန (၆) မျုိုး - by အိအိအောင် - Ei Ei Aung Short, Simple and Easy to Remember Dhamma Note, DhammaWeb ထာဝရ ကုသိုလ်တိုးပွားစေတဲ့ ထာဝရဒါန (၆) မျုိုး by အိအိအောင် Untitled Document
ထာဝရ ကုသိုလ်တိုးပွားစေတဲ့ ထာဝရဒါန (၆) မျုိုး (၁) အာရာမရောပဒါန- ပန်းဥယျာဉ်၊ သစ်သီးဥယျာဉ်များကို လှူဒါန်းခြင်း။ (၂) ၀နရောပဒါန- အရိပ်ကောင်းတဲ့သစ်ပင် များကို စိုက်ပျိုးလှူဒါန်းခြင်း။ (၃) သေတုကာရကဒါန- တံတားခင်းပြီး လှူဒါန်းခြင်း။ (၄) ပပါဒါန- ရေအိုးစင်တည်၍ လှူဒါန်းခြင်း။ (၅) ဥပပါနဒါန- ရေတွင်းရေကန်တူး၍ လှူဒါန်းခြင်း။ (၆) ဥပဿယဒါန - ဇရပ်၊ တန်ဆောင်း၊ ကျောင်း၊ ပြာသာဒ်၊ သိမ်၊ ဓမ္မာရုံ လှူဒါန်းခြင်း။ ဒီဒါန (၆) မျိုးအနက် တစ်မျိုးမျိုးကို လှူဒါန်းသူဟာ နေ့ရော ညဉ့်ပါ အခါခပ်သိမ်း ကုသိုလ်တရား တိုးပွားတယ်။ သေလွန်တဲ့အခါ နတ်ပြည်သို့ လားရောက်ရတယ်။ သာဝတ္ထိပြည် ဇေတ၀န်ကျောင်းမှာ မြတ်စွာဘုရားသီတင်းသုံးစဉ်အခါ ညဉ့်သန်းခေါင်ယံမှာ နတ်သားတစ်ပါး မေးလျောက်တယ်။ “အရှင်ဂေါတမ… အဘယ်သူတို့ဟာ နေ့ရောညဉ့်ပါ အခါခပ်သိမ်း ကောင်းမှုတိုးပွားကြပါသလဲ၊ အဘယ်သူတို့ဟာ သီလနှင့် ပြည့်စုံပါကုန်သလဲ၊ အဘယ်သူတို့ဟာ နတ်ပြည်သို့ သွားကြရကုန်ပါသလဲ” “ အို…နတ်သား၊ အကြင်သူတို့ဟာ သစ်သီးဥယျာဉ် ၊ ပန်း ဥယျာဉ်။ အရိပ်ကောင်းသစ်ပင်များကို စိုက်ပျိုးလှူဒါန်းကြတယ်၊ တံတားခင်းကြတယ်၊ ရေအိုးစင်တည်ခင်းကြတယ်၊ ရေတွင်း ရေကန်နှင့် ကျောင်း၊ သိမ်၊ ဓမ္မာရုံ နေရာကောင်းတို့ကို လှူဒါန်းကြတယ်၊ ထိုသူတို့မှာ နေ့ရော ညဉ့်ပါ အခါခပ်သိမ်း ကုသိုလ်တိုးပွားတယ်၊ ထိုသူတို့ဟာ တရားမှာ တည်ကုန်တယ်၊ အလေ့အထ စာရိတ္တသီလ နှင့် ပြည့်စုံကုန်တယ်၊ ထိုသူတို့ သေလွန်တဲ့အခါ နတ်ပြည်သို့လားရောက်ကြတယ်”
(ထာဝရ ကုသိုလ်တိုးပွားစေတဲ့ ထာဝရဒါန (၆) မျုိုး ) by Ei Ei Aung (အိအိအောင်) ကုသိုလ် နှင့်သက်ဆိုင်သော ဓမ္မမှတ်စုများ No.	Myanmar Language Title author 1 ကုသိုလ်မျိုး ၈-ပါး။ ။ Myanmar Cupid Forum2ထာဝရ ကုသိုလ်တိုးပွားစေတဲ့ ထာဝရဒါန (၆) မျုိုး အိအိအောင်3အပါယ်လေးပါးမှ လွတ်မြောက်စေနိုင်သော ကုသိုလ်(၇)မျိုး အရှင်ဝိမလဝံသ (နာလန္ဒာတက္ကသိုလ်)4ကုသိုလ်ဘယ်လောက်ရနိူင်ပါသလဲ ဦးကောဝိဒ(မြိတ်)5အကုသိုလ် ပယ်နည်းများ‏ ဓမ္မရနံ့ List of Dhamma Notes related to Akusala :5Dhamma Notes, DhammaWeb DataBase